Afrika, 01 August 2018
ZANU-PF oo ku guuleystay doorashada Zimbabwe
Xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee ZANU-PF ayaa ku guuleystay tirada ugu badan ee kuraasta baarlamnka dalkaas, sida ay muujineyso qeyb ka mid ah natiijada doorashada oo maanta la shaaciyey.
ONLF iyo Shirkii Abiy ee Minnesota
Ra'iisal Saasaraaha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Isniintii la kulmay qaar ka mid ah Jaaliyada Soomaalida ee dalka Ethiopia oo ay ku jireen xubno ka socda ururka ONLF, iyada oo xubno kale oo ururkaas ka tirsanaa ay sheegeen in talaabadaasi ayna habbooneyn.
Washington: Abiy oo la Kulmay Jaaliyadda Ethiopia
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa booqashadiisii ugu horeeysay ku tagay Maraykanka, isaga oo kumanaan xubnood oo qurbo joog ah kula hadlayayWashington maalintii Sabtida ee shalay, kulankan oo dhacay iyadoo ay dhowaan qabowday xiisadda u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea.
Abiy oo maanta booqanaya Washington
Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta safarkiisii ugu horreeyey ku tagaya dalka Mareykanka, halkaasi oo uu booqan doono qurb-joogta dalkiisa ee magaalada Washington DC.
Imaaraadka, Ethiopia iyo Eritrea oo shiray
Magaalada Abu-Dhabi waxaa maanta ka dhacay kulan saddex geesood ah oo dhexmaray madaxda, Imaaraadka, Ethiopia iyo Eritrea.
Jabuuti oo raadineysa heshiiska Eritrea
Dowladda Djibouti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo af-jaro colaadda kala dhaxeysa Eritrea.
Jabuuti: Magdhow ayaan siineynaa DP World
Baarlamanka Masar oo ansxiiyay xeerar cusub
Ka dib markii madaxweynaha Eritrea Isias Afawerqi uu booqasho shalay ku tagay magaaladda Addis Ababa ee xaruunta dalka Ethiopia, ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Jabuuti oo ay deris yihiin labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea waxay walaac ka muujiyeen heshiiska labada dal